Ruushka oo ku baaqay in la qafiifiyo cunaqabateynta hubka Somaliya | Baydhabo Online
Ruushka oo ku baaqay in la qafiifiyo cunaqabateynta hubka Somaliya
Dowladda Ruushka ayaa Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay u soo jeedisay in la qafiifiyo cunaqabateynta dhanka hubka ah ee saaran Somaliya.
Ruushka waxa uu sheegayaa in cunaqabateynta aan dhamaadka laheyn ee saaran Somaliya ay qeyb ka tahay nabad gelyo la’aanta ka jirta Somaliya,waxaana uu soo jeediyay in cunaqabateyntaas tartiib tartiib looga qaado Somaliya.
Wakiilka Dowladda Ruushka ee Golaha Amaanka Petr V. Iliichev,ayaa Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ka dalbaday in cunaqabateynta saaran Somaliya hoos loo dhigo si ciidanka xoogga dalka Somaliya ay u helaan qalab iyo tababar ku filan si ay uga adkaadaan Al-shabaab.
Waxa uu ku dooday in dhoofinta dhuxusha ee sharci darrada ah,Burcad Badeedda iyo dagaalka Al-shabaab ay horseed u tahay tabaryarida dowladda dhexe iyo cunaqabateynta aan dhamaadka lahayn ee saaran Somaliya sidaas darteedna ay tahay in la qaado ama la qafiifiyo.
Kulan ay Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ka yeesheen xaaladda Somaliya ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay Wakiillada Waddamada ku jira Golaha amaanka kuwaas oo dhamaantood isla gartay in Al-Shabaab ay qatar ku tahay amniga bariga Afrika.
Wakiilka Dowladda Itoobiya ee Golaha ammaanka Tekeda Alemu,ayaa isna sheegay in Al-shabaab ay wali tahay awood ka jirta Somaliya waxaana uu soo jeediyay in waddamada Itoobiya, Somaliya iyo Eritrea ay meel iska dhigaan mad madowga u dhaxeeya una soo jeestaan ka hortagidda Al-shabaab.